မုန်ညင်းဆီနှင့်ကျန်းမာရေး ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
1. မုန်ညင်းဆီနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ ကိုနှိပ်နယ်ပေးပါက၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိအဆိပ်အတောက်များနှင့် ပိုလျှံသောရေများသည် ချွေးအဖြစ် ထွက်ရှိလာအောင် မုန်ညင်းဆီကလှုံ့ ဆော်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါသည် ။ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုလဲ ထိန်းညှိပေးပါသည်။
2. အသားအရည်ခြောက်သွေ့ ခြင်းနှင့်နေလောင်ဒဏ်ရာများအတွက်၊ မုန်ညင်းဆီကိုအလှဆီအဖြစ်လိမ်းပေးနိုင်ပါသည်။
3. မုန်ညင်းဆီဖြင့်ဦးရေပြားကိုနှိပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီး၊ ဆံပင်များကို လဲသန်စွမ်းနက်မှောင်စေပါသည် ။
4. ရိုးရာကုထုံးနည်းများတွင် သွေးတိုးရောဂါနှင့်နှလုံးရောဂါများအတွက်၊ မုန်ညင်းဆီကိုသောက်သုံးကြပါ သည်။
5. နားထင်တွင်မုန်ညင်းဆီဖြင့်အ သာအယာနှိပ်နယ်ပေးပါက၊ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာများကို ယူပစ်သလိုပျောက်ကင်းစေပြီး၊ ပေါ့ပါး လန်းဆန်း လာစေပါသည်။
6. မုန်ညင်းစေ့နှင့်မုန်ညင်းဆီ တို့ ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် သွေးဆုံးကိုင်ဝေဒနာများကို သက်သာစေပါသည်။ ထို့ ပြင်အစာချေစံနစ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး၊ နှုတ်မြိန်စေပါသည်။
7. နို့ စို့ ရွယ်ကလေးငယ်များရင်ပြည့်ရင်ကယ်မဖြစ်စေရန်အတွက်၊ ၀မ်းဗိုက်နှင့် ရင်တဘ်တို့ ကို မုန်ညင်းဆီဖြင့် အသာအယာ ပွတ်နယ်လိမ်းကျံပေးနိုင်ပါသ ည်။
မုန်ညင်းစိမ်းသည် ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးအိမ်တို့ ကို ကောင်းကျိုးပြုပါသည်။ သို့ သော် မုန်ညင်းစိမ်းထဲတွင် Oxalate ဓာတ်ပါရှိသောကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်းတွင် ကျောက်တည်သောဝေဒနာရှင်များစားသုံးရန်မသင့်ပါ။
ထို့ ပြင် မုန်ညင်းစိမ်းထဲတွင် goitrogens ဓာတ်တစ်မျိုးပါရှိရာ၊ ထိုဓာတ်သည် သိုင်းရွိုက်ဟိုမုန်းထုတ်လု ပ်ခြင်းကို အဟန့် အတားဖြစ်စေသောကြောင့် သိုင်းရွိုက် ဝေဒနာသည်များလဲ မုန်ညင်းစိမ်းစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ လူသားတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် အားသာချက်များသော မုန်ညင်းစိမ်း ကို အစာလဲဆေး၊ ဆေးလဲအစာ အဖြစ် စားသုံးပေးကြပါရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရပါသည်။
ရည်ညွှန်း။ encyclopedia Health Benefits of Green Mustard